Sheeko qosol badan. – ASM Raage
Wuxuu yidhi habeen baan Waxaan aniga iyo saxiibkey aadnay shukaansi annagoo dareemyna in hablaha waalidkood uu taraawiix aaday.Annagoo hadaba joogna illinka guriga inantana Aan is agtaanahy ayaa waxaa soo laba noqday aabeheed, oo shakki uu qabay darteed Aan taraawixda tukan oo kaliya soo tukuday cishihii.
Markaan arkay ayaan is idhi hadaad dhaqaaqdo waa laga shakine, gurigii baan horey horey u galay, dabeetana intaan qol halkaana galay ayaan firaash korka Isla saaray inantina inty iga soo daba gashy ayay dhar kale kor iga sii saarty.
Odaygii ayaa wuxuu yidhi mee gabadhii kula joogty markaas ayan idhi aabbe heblaayo ayay ahayd oo jaarkeenna.Odaygii wuxuu ii fadhiisaty ayuu yidhi iriddii halkaas ayuuna cashadii ku cunay.
Wuxuu halkaa fadhiyaba Waxay gaadhy 9:00 BBCda ayuu halkaa ku dhegysty.
Marbuu kacay oo xagga qolkale aaday, markaasay inty soo today igu tidhi buu yidhi soo bax, aabe wuu kacaye, markaasaan ku idhi buu yidhi naa orodo iga tag odayga waa xeyraan, oo Aan markaa dareesanaa inuu wax gaadayo.
Durba wuu soo noqday odaygii oo bartiisii fariisty.
Inanta firaash yo kale ayay dusha iga sii saarty.
Lkn in cabaara markaan meeshii ku jiray, ayay ciyaalkii xaafadda mid kasta firaashyadiisii iga qaaty.
Odaygii mar buu kacay uu suuliga ayaan gelaya, markaas ayaan fikaday.
Kaaga sii darane hooyadey oo xanuunsanyd ayaa dawo ii diratay markii hore een guriga kasoo baxayay.Hooyo ayaan utegay mar ay saq badh ku dhowdahay.
Mar alle markay indhaha isaarty ayay itidhi buu yidhi bax waryaa guriga ayay iga eriday.Walalaahi mar dhaweyd ayuu iiga sheekeeyay.
Adi Tanoo kale makugu dhacday?
Hadey ku qabsan lahayd maxaad samyn lahayd?